Maleeshiyada Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyada Al-Shabaab oo la wareegay deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya
October 23, 2016 Abdi Omar Bile Somalia, South-Central 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaalyahanada kooxda hubaysan ee Al-Shabaab ayaa qabsaday deegaanka Halgan ee gobolka Hiiraan kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowlada federaalka Soomaaliya, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Boqolaal dagaalyahano hubaysan oo Al-Shabaab ah ayaa saakay oo Axad ah la wareegay deegaanka Halgan.
Al-Shabaab ayaa intii lagu guda jiray afartii asbuuc ee u dambaysay sidoo kale la wareegtay deegaanada Maqokori iyo Ceel Cali oo kuyaala gobolka Hiiraan kadib markii ay ka baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowlada federaalka Soomaaliya.
Halgan oo 300km dhanka waqooyiga ka xigta Muqdisho ayaa maleeshiyada Al-Shabaab weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada Itoobiya ku lahaayeen halkaas bishii Juun ee sanadkan, iyagoo sheegay in ay weerarkaas ku dileen ku dhawaad 43-askari oo Itoobiyaan ahaa, balse Itoobiya ayaa diiday sheegashada Al-Shabaab.
Arrintan ayaa kusoo beegmaysa asbuuc kahor markii maamul goboleed cusub oo la dhaho Hir-Shabeelle loo dhisay gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
April 4, 2017 Koox looga shaki qabo burcadbadeed oo dooni ganacsi ku afduubtay xeebta gobolka Mudug
Ugu yaraan hal qof oo ku dhintay qaraxyo ka dhacay magaalada Utsunomiya ee Japan